दबाइ "Kvinaks" (आँखा खस्छ) समीक्षा, मूल्य, गाइड, संरचना
Cataracts संग सम्बन्धित छ जो व्यक्ति, को शारीरिक अवस्था भनिन्छ आँखा लेन्स को clouding। ज्ञात छ, यो दृष्टि को विकार को एक किसिम को कारण र पनि यसको हानि पूरा गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीं यो रोग जस्तै विकिरण वा चोट रूपमा बाह्य कारक को प्रभाव अन्तर्गत विकास। साथै, यो अवस्था को कारण रोग को एक किसिम, मधुमेह सहित हुन सक्छ।
शारीरिक phacoscotasmus बताए प्रोटिन denaturation, भन्नुभयो शरीर को एक भाग हो जो।
Cataract अन्धो सबै अवस्थामा लगभग आधा को कारण छ। त्यसैले, यो विकास को प्रारम्भिक चरणमा उपचार गर्नुपर्छ। यो धेरै अक्सर दबाइ "Kvinaks" प्रयोग गर्नुहोस्। यो उपकरणको मूल्य, यसको आवेदन, सङ्केत गर्छ र टिप्पणीहरू तल प्रस्तुत छ।
फारम, संरचना, वर्णन र प्याकेजिङ्ग
दबाइ "Kvinaks" कुनै पनि फारम बिक्रि? आँखा घटेको, समीक्षा तल दिइएका छन् जो दबाइ को मात्र फारम छन्। तिनीहरूले राखिएको थियो जो बैजनी-रातो पारदर्शी समाधान हो 15 मा एमएल vials, प्लास्टिक dropper।
यस दबाइ को मुख्य घटक सोडियम azapentatsena polysulfonates कार्य। आँखा घटेको मा पनि समावेश बोरिक एसिड, methylparaben, thimerosal, propylparaben र purified पानी।
दबाइ को pharmacological कार्य
दबाइ "Kvinaks" (आँखा खस्छ) के हो? समीक्षा यसलाई cataracts को उपचार को लागि एक राम्रो उपाय हो भनेर रिपोर्ट गरेका छन्।
therein कारण उपस्थितिको दबाइ को प्रभावकारिता azapentatsena (मुख्य सक्रिय तत्व रूपमा)। यसलाई अन्ततः अपारदर्शी लेन्स सामाग्री को dissolution निम्त्याउँछ जो आँखा कोठामा, अगाडि proteolytic इन्जाइम मिश्रित चिस्यान क्रियाशीलता।
कला अनुसार, तल प्रस्तुत छ सङ्केत गर्छ जो को दबाइ "Kvinaks", चयापचय प्रक्रियाहरू सुधार हालतमा एक वर्ग Metaboliki, अर्थात् बुझाउँछ।
यो दबाइ ओक्सीकरण प्रतिक्रिया को नकारात्मक प्रभाव देखि sulfhydryl यौगिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
यो दबाइ "Kvinaks" (आँखा खस्छ), जो को समीक्षा एक ठूलो हदसम्म सकारात्मक छन् भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिनुहोस् छैन असंभव छ, यो एक एंटीओक्सिडेंट प्रभाव छ।
केही अवस्थामा, आँखा "Kvinaks" खस्छ सल्लाह दिन्छन्? यो दबाइ प्रयोग cataract सबै प्रकारका (जस्तै, पोस्ट-दर्दनाक, जन्मजात, कमजोर जटिल) मा संकेत गरिएको छ।
यो पनि केही अवस्थामा, दबाइ पहिले नै निदान र विद्यमान रोग आँखा परिवर्तन पृष्ठभूमिमा विरुद्ध विकसित कि माध्यमिक cataract प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
जब विरामीहरु आँखा "Kvinaks" खस्छ छैन निर्धारित गर्नुपर्छ? समीक्षा गर्दा azapentatsenu गर्न व्यक्तिगत अतिसंवेदनशीलता, साथै अन्य सहायक तत्व मा लागू गरियो दबाइ, भिजुअल अंगहरु मा नकारात्मक प्रभाव छ रिपोर्ट गरेका छन्।
साथै, यो सुविधा गर्भवती महिला र युवा आमा, खुवाउने नर्सिङ बच्चाहरु लागि सिफारिस गरिएको छैन।
Dosing "Kvinaks" तयारी
आँखा घटेको, समीक्षा सबैलाई छोड्न सक्छन् जो तपाईंले एक दिन पाँच पटक सम्म प्रयोग गर्न आवश्यक छ। दबाइ 1-2 थोपा को मात्रा मा प्रभावित अंग cataract मा डाले छ।
यो निदान संग मान्छे चिकित्सकीय प्रभाव उपचार केही दिन पछि देख्न सकिन्छ भने, चिकित्सा लामो समयसम्म आवश्यक छ।
यो आत्म-दबाइ रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
को घटेको बोतल औषधि प्रयोग गरेर पछि भारी विशेष आवरण ढाकिएको।
को थोपा दबाइ खोल्ने पछि एक महिना को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ।
साइड इफेक्ट र ज्यादा मात्रा
सहन दबाइ "Kvinaks" को रूपमा? समीक्षा आँखा यो दबाइ allergenic को इतिहास संग मान्छे मा conjunctiva मा एलर्जी प्रतिक्रिया हुन सक्छ कि।
यसबाहेक, यो उपकरण को आवेदन को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध गरिब दृश्य धारणा हुन सक्छ। सामान्यतया, यस्तो प्रतिक्रिया यसको आफ्नै पछि 25 मिनेट मा गायब।
सामान्य मा, सक्रिय दबाइ राम्रो विरामीहरु द्वारा सहन छ। उहाँले सानो खुराक मा swallowed गर्दा साइड इफेक्ट अवलोकन छैन।
अधिमात्रा को अवस्थामा दर्ता गरिएको छैन।
को शीशी संग सम्पर्क बाट आँखा र श्लेम लाग्एको पटल छाला जोगाउन गर्न छलफल दबाइ backfilling गर्दा।
भित्र ¼ instillation पछि घण्टा रोगी धमिलो अनुभव हुन सक्छ हो। त्यसैले, यस्तो एउटा अवधि सडक व्यवस्थापन र खतरनाक काम नगर्न गर्नुपर्छ।
को शीशी मा दबाइ समाधान को जीवाणु दूषण रोक्न क्रममा आफ्नो विंदुक स्पर्श गर्न निषेधित छ।
analogues लागत र
कसरी धेरै घटेको "Kvinaks" छन्? यो एजेन्ट को मूल्य 340-370 rubles छ।
एक फार्मेसी देखि रिपोर्ट दबाइ किन्न केवल एक नेत्र रोग विशेषज्ञ देखि एक निर्धारण को प्रस्तुति मा।
आवश्यक छ भने, दबाइ यस्तो analogs (संयोग संकेत) "Taufon" को रूपमा बदलिएको गर्न सकिन्छ, "Vitafakol", "Naklof", "Indotsid", "Oftan Katahrom", "फोकस"। यो औषधीले को संरचनात्मक analogues छैन।
उपभोक्ता समीक्षा छलफल उपकरण साँच्चै cataracts को उपचार मा मद्दत गर्छ भन्छन्। यो दृष्टि सुधार र रोक्छ अन्धो विकास।
यो दबाइ को लाभ पनि यसको उपलब्धता, अपेक्षाकृत कम लागत र साइड इफेक्ट को एक ठूलो संख्या को कमी समावेश गर्नुहोस्।
"Moriamin गुण": पुस्तिका, समीक्षा, analogs, संरचना
Rotokan। प्रयोग र औषधिको खुराक
"सोडियम citrate" को प्रयोग निर्देशन
"Unitiol": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
औषधि "Andipal": समीक्षा र विवरण
टमाटर "ठूलो आमा": समीक्षाहरू, फोटोहरू, विशेषताहरू, उत्पादकता
कसरी आफ्नो फोन "प्ले स्टोर" मा स्थापना गर्न यो थियो भने
सुन्दर छत - डिजाइन स्पेस महत्वपूर्ण तत्व
तालिका नम्बर 5: आहार र नमूना मेनू
आफ्नो कान घरमा घायल रूपमा? सुझाव र चाल
कसरी एक केटी प्रेम स्वीकार गर्न?
तनाव छत मा होल: कसरी ठीक माथि बन्द गर्न?
Astigmatism एक बच्चा छ: कारणहरू, लक्षण र उपचार
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा मिश्री पुल: तस्बिर र समीक्षा
एसईओ ब्लग मा पदोन्नति को विधिहरू